Maalinta "fasaxa caadada" haweenka ee Zambia oo dood ka taagan tahay - iftineducation.com
Maalinta “fasaxa caadada” haweenka ee Zambia oo dood ka taagan tahay
iftineducation.com – In laga doodo caadada dumarka si furan waa arrin laga xishooda gudaha dalka Zambia.
Hadana, shaki kuma jiro sababta sharcigan loo sameeyay ee ah in dumarka ay maalin shaqada ka nastaan.
Maalinta oo loo bixiyay “Maalinta Hooyada”, wuxuu saameynaayaa dhammaan dumarka aan la qabo iyo kuwa aan la qabin.
Sharaxaadda sharci ahaan ee arrinta lama cadeyn. Dumarka waxaa loo ogol yahay inay fasaxaqaataan maalintey doonaan, loogamana baahno cadeyn caafimaad.
Sidaasi darteed waxaa ka taagan su’aalo ku saabsan sababta loo sameeyay xeerkan cusub, iyo ujeedadiisa.
“Waxay ila tahay inuu sharci fiican yahay, sababtoo ah dumarka dhib badan ayey la kulmaan marka ay caadada qabaan,” ayey tiri Ndekela Mazimba, oo ka shaqeyso arrimaha bulshada.
Ms Mazimba lama guursan, balse way qaadataa fasaxa Maalinta Hooyada bilkastaa, si ay u nasato maadaama xanuunka ay kala kulanto caadada, sida ay sheegtay.
“Xanuunka waad dareemi kartaa maalinta kugu horeyso. calool xanuun baad dareemi kartaa, xaqiiqdii xanuun daran. daawo kasta oo aad qaadato, maalintii oo dhan sariirta kama kici kartid,” ayey hadalkeeda ku dartay.
Dumarka Zambia uma baahna inay isu sii diyaariyaa fasaxa caadada, balse waa inay isla maalintaas ay ku wargeliyaan xafiiska una sheegaan in qaadanayaan fasaxa Maalinta Hooyada, ayagoo aan imaan shaqada.
Maamulihii u diida dumarka shaqaalaha fasaxa Maalinta Hooyada waalagu dacweyn karaa, sida uu sharciga qabo.
Maamulaha shirkadda ay ka shaqeyso Mazimba, Justin Mukosa, ayaa taageeray sharciga, wuxuuna sheegay inuu fahamsanyahay dhibaatada dumarka ay kala kulmaan shaqada iyo masuuliyadda reerka.
Wuxuu sheegay inay jiraan xaalado adag oo lagala kulmo. Waqti yar oo gooban gidihiisana aanan qof shaqaale ah lagu fasixi karin, taasna ay u baahan tahay in wax laga badalo.
Dadka oo dhan ma aysan taagerin fasaxan Maalinta Haweeka waxaana dadkaasi xitaa ka mid ah dumar badan.
Mutinta Musokotwane-Chikopela waa haweeney reer leh, dhashayna saddex carruur ah. Waay shaqeysaa balse waligeed ma aysan qaadan fasaxa Maalinta Hooyada, waxa ayna ku doodeysaa in fasaxan uu dumarka ku dhiirigelinayo cajis, gaar ahaanna dumarka shaqeeya.
Chikopela waxa ay leedahay waxaa habboonaan lahaa in la kala caddeeyo waxa loola jeeda fasaxa Maalinta Hooyada.
Sharcigan waxaa sidoo kale aad u taageeraya urarka shaqaala qaran ee dalkaasi balse Catherine Chinunda oo ururkan ka tirsan waxay rumeysan tahay in haweeneydii fasaxeeda qaadata iyadoon xayl qabin ay tahay in fasaxaasi loo diido marka uu ku dhaco.
Catherine Chinunda waxay sheegtay “Dumarka waan ku wacyigelineynaa waxa ay tahay Maalinta Fasaxa Hooyada. Ujeedada waa inay nastaan, xittaa waa in aysan aadin suuqa, ama aysan qaban shaqo kale, sababtoo ah taasi waa qalad”.
Laakiin, sharciga muusan cadeyn waxa la ogol yahay iyo waxa la diidan yahay maalintaasi dumarka u gaarka ah.
Waxay u muuqataa in meelaha ay dumarka ka shaqeeyaan ay lahaadaan xeer hoosaadyo, lana tixgelindoono.
Waxay beenisay fikradda ah in dumarka ay iska qaataan maalin fasax bilkastaa, sida dadka qaar ay soo jeediyeen.
“Ragga mararka qaar shaqada way isaga maqan yihiin, laakiin may oga dhibka ay leedahay maalinta caadada in la shaqeeyo”, ayey ku difaacday arrinta.
Dad badan ayaa aaminsan in jahwareer uu abuuray sharcigan cusub. Waxay ku doodayaan in loo baahan yahay in la cadeeyo waxyaabo badan.
Linda Kasonde, oo ah qareen sare ayaa sheegtay: “Sababta ay muhiimka u tahay maalinta Hooyada ee Zambia waa in la gartaa in dumarka ay yihiin aasaaska qoyska iyo qofka ugu horeeya ee daryeela. Kuma xirno in la qabo ama inaan weli la guursan”.